Topnepalnews.com | सामाजिक सञ्जालमा तथानाम गाली गरेपछि प्रियंकाले चित्त दुखाइन्
सामाजिक सञ्जालमा तथानाम गाली गरेपछि प्रियंकाले चित्त दुखाइन्
Posted on: April 30, 2016 | views: 371
५ बैशाख, काठमाडौं ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा तथानाम गाली गर्दै म्यासेज र कमेन्ट गरेपछि नायिका प्रियंका कार्कीले आफ्नो मन रोएको बताएकी छिन् ।
फेसबुकमा कमेन्ट गर्ने केही व्यक्तिले आफुलाई चोट पुर्याउनेगरि गाली गरेपछि नायिका प्रियंका कार्कीले कुनै फिल्मको म्युजिक भिडियो वा फोटो सेयर गर्दैमा आफुलाई गालि गर्नुको कुनै कारण नरहेको बताएकी छिन् ।
मेरो मनलाई रुवाउनेहरुका लागि शिर्षकमा फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै नायिका कार्कीले आफुलाई गाली गर्नेलाई सोधेकी छिन्-'किन यति धेरै गाली गर्नुहुन्छ मलाई ? के मैले कुनै प्रकारको चोट पुरा ? तपाईलाई व्यक्तिगत ठेस पुराए ?? रन्डी, भालु, बेशिया यस्ता शब्दर प्रयोग गरेर बडा आनन्द महसुस हुन्छ हो ?'
कलाकार दिनरात मेहनत गर्ने, चाडबाड केही नभनी अरुलाई मनोरञ्जन दिन देश विदेश पुग्ने गरेको भन्दै यस्ता कुराले कति चित्त दुख्छ भन्ने कुरा सोच्न आग्रह गरेकी छिन् ।
आफुलाई फेसबुकमा गाली गरेका शब्द देखेर आफुलाई आमाले समेत त्यस्ता म्यासेज डिलिट गर्न भन्ने गरेको भन्दै अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले-'घरमा छोरी चेली छैनन ? भन्दै घरमा भएका दिदी बहिनी, आमा, भाउजू छोरीहरुमाथि कसैले यस्ता शब्द प्रयोग गरेमा कस्तो महशुस हुन्थ्यो ?' सोच्न आग्रह गर्दै यस्छो स्टाटस लेखेकी छिन् ।
मेरो मनलाई रुवाउनेहरुका लागि -
जब जब म नया फोटो हाल्छु, कुनै नया फिल्मको गीत या म्युजिक भिडियो शेर गर्छु, किन यति धेरै गाली गर्नु हुन्छ मलाइ? के मैले कुनै प्रकरको चोट पुराए? तपाइलाइ ब्यक्तिगत रूपमा ठेस पुराए?? 'रन्डी', 'भालु', 'बेशिया'.... येस्ता शव्दहरु प्रयोग गरेर बडा आनन्द महसुस हुन्छ हो? एक्दम महान काम गरे झै लाग्छ हो?
हामी कलाकर दिन रात मेहेनत गर्छौ। घरी फिलिम शुटिङ, घरी कार्यक्रम। दशै, तिहार, चाड पर्व केही न सोची यहाँहरुलाइ मनोरंजन दिन घरी कतार, घरी मलेसिया त घरी अस्ट्रेलिया पुग्छौ। के को लागि? येहि आलोचना खप्नको लागि? कति चित्त दुख्छ होला सोच्नुस ।
यहाँहरुको घरमा छोरी-चेली छैनन? एक पटक सोच्नुस त, तपाइको घरको दिदी-बहिनी, आमा, भाउजू, छोरी हरु माथी येस्तो शब्द कसैले प्रयोग गर्दा, तपाइलाइ कस्तो महसुस हुन्थ्यो?? ठिक त्येस्तै महसुस हुदो होला नि मेरा बुबा, आमा, भाइ र अन्य परिवारका सदस्यहरुलाइ। कहिले काहीँ मामुले फोन गरेर 'छोरी कस्तो नराम्रो लेखेछ तिम्रो फोटोमा हेर त। छिटो डिलिट गर' भन्नूहुन्छ। कति चित्त दुख्छ होला वहाँको ।
तपाइलाइ यदि म मन पर्दैन भने बिन्ती मेरो पेजमा आउदै न आउनुस। बरु ब्लक गर्नुस मलाइ तर अश्लील, जथाभावी कृपया न लेखि दिनुस होला।
देशको कलाकारको सम्मान, देशबाटै शुरु हुन्छ। हामीले नगरे, कल्ले त?
यती भन्न चाहन्थे।